Ogaden News Agency (ONA) – Males Zenawi oo Geeriyoday 4 maalmood Kahor! waxa saas shegay shaqale ka tirsan Ethiopian Airline.
Males Zenawi oo Geeriyoday 4 maalmood Kahor! waxa saas shegay shaqale ka tirsan Ethiopian Airline.
Wargeysyada caalamka ayaa illaa hada ka hadlaya xanuunka Males Zenawi iyada oo dowlada Ethiopia ee ay ka taliyaan qowmiyada tirada yar ee Tigreegu ay ilaa hada bixin waayeen wax maskaxda bani aadamka gasha oo jawaab ah. Waxa taliska TPLF ee Tigreegu sheegeen in males Zenawi wadanka ka taliyo oo wali isaga laga amar qaato. Waxa ay sheegeen oo kale in Zenawi uusan kaligii ka talin wadanka, maqnaanshihiisuna wax saameyn ah ku keenin nidaamka kala danbeynta dowliga ah. Waxa kale oo ay sheegeen in uusan qabin xanuunka Cancer-ka ee maskaxda ku dhaca.
Balse waxa ay sheegi waayeen meesha uu ku suganyahay, xanuunka haya waxa uu yahay, iyaga oo shegay innuu xanuunsanayo reerkisa iyo dhaqtarkisana ay u taalo inay oggadan oo dadka ethiopia iyo caalmaka muhiimad u laheyn in loo sheego goobtu joogo Zenawi iyo xanuunka haya waxa uu yahay. Taliska TPLF waxay ku cel celiyeen in Males Zenawi uu fasax (holiday) kumaqanyahay.
Hadalada is Khilaafsan iyo warka aan cadeyn ee kasoo baxaya taliska TPLF ayaa ay ka muuqata walbahaar xoogan waxana siyaasiyinta caalamku ay shegeen inay tilmaan fiican u tahay in Dhib weyn jiro. isla markaasna taliska TPLF ku jiro diyaar garow qofkii badali lahaa.
Haddaba wararka xanuunka ku yimid Zenwi aya markii horeba waxa so tabiyay dad shacab ah oo sheegay in Zenawi xanuun khatar ah hayo wadankana laga saaray, muddo kadib waxa soo baxday warkaas xaqiiqdiisi, waxana la cadeeyay Zenawi innuu ku jiro dhaqtar ku yaala belgium oo lagu dhayo dadka qaba cudurka cancer-ka ee ku dhaca dhiiga. Arrintaas oo ilaa hada Dowlada Ethiopia dafirtay balse ay soo cadeyeen diblomasiyiin ree galbeed ah oo arkay Zenawi.
Waxa hadana la sheegay in Zenawi uu dhintay. Arintaas oo taliska TPLF ku sheegeen in uusan dhiman lakiin mucaaradka Ethiopia ay jecelyihiin in Zenawi dhinto. Hadaba maxaa kajira oo lagu aamini kara dhimashada Zenawi.
1. Waxaa maanta markale soo xidhiidhay nin u dhashay Ethiopia oo ka shaqeeya Diyaradaha Wadanka Ethiopia Ninkaas ayaa sheegay in Males Zenawi uu dhintay 4 maalmood ka hor. Waxa uuna sheegay in arrintaas uu ka maqlay Pilot tigree ah, oo laga yaabo innuu yahay Pilotkii lagu soo qaaday diyaaradiisa Meydka Males Zenawi.
2. Dowlada Ethiopia oo illaa hada qarinaysa xanuunka Zenawi, Haduu noolyahay maysan muran galiyeen cafimaadkisa iyo cafimad daradisa. Qof kasta oo bani aadam ah waa xanuunsada, waxay ku ekaan lahaayen waa xanuunsanyahay wuuna nabad qaba. Dowlada Ethiopia maysan ka hadasheen in Zenawi uu yahay ninka haya talada Ethiopia iyo inkale. Waxay taas muujinaysa innusan waxba gacan ugu jirin Zenawi. Dadka Ethiopia ee 90 million ku dhowna maysan been u sheegeen. Dowlada Ethiopia cadhada iyo muranka badan ay kula jirto warbaahinta ree galbeedka maysan isku mashquliseen haduu nool yahay Zenawi.
3. Dhimashada Zenawi waxa loo qarinaya in Woyanuhu uu helo waqti uu kusoo diyaariyo qofkii badali lahaa Zenawi. Midaas oo qaadan karta bil iyo kabadan. Maadama wax horey ugu diyaarsana uusan jirin wadankuna uu ahaa wadan nin kaliya ka taliyo. Waxa dhimashada Zenawi saameyn ku keentay, haayad kasta oo ka jirta wadanka oo kaligiis ka amar qaadan jirtay. Waxaana dhibaato ka taagantahay sidii loo maamuli lahaa dadkaas.
4. Waxaa warar sugan ay sheegeen in taliska TPLF uu magacabeen dowlad Transitional ah oo illaa hada la sheegay 4 qof oo Tigree ah oo loo magacabay inay noqdaan gudida maamuli doonta Ethiopia inta laga keeni doono qofki badali lahaa Zenawi.
arimahaas iyo waxyaale kaleba waxay tilmaan buuxda u tahay in Zenawi dhintay. Woyanuhuna dhigayo Ruwayad dadka lagu maawelinayo si kacdoon iyo gadood uga dhicin Ethiopia oo looga faa ideysan moral jabka gumeysiga daciifka ah.
Waxase yaab leh in illaa hada Hospitalkii Brusels ee uu ku dhintay Zenawi illaa hada ay hor tuban yihiin ilaaladii Zenawi. Waxana ay noqonaysa Ruwaayad kale oo loo dhigay Ilaalada oo larabo in mucaaradka Ethiopia la tuso in Zenawi wali ku jiro Hospitalka, ama Ilaalada laftigooda ayaa laga qarinaya si aysan u fashilinin sirta TPLF.